We Love Cele, Author at We Love Cele - Page 329 of 334
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးတွေကို အပိုင်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါဆုရှင်ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုရှင် မင်းသမီးလေး ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ဧကရာဇာဓာတ်မြေသြဇာကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးကြော်ငြာရိုက်ကွင်းမို့ မင်းသမီးလေး ပိုင်ဖြိုးသုကို ဖက်ရမှာ ရှက်ကြောက်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။ ကြော်ငြာရိုက်ကူးတာပထမဆုံးဖြစ်ပေမယ့်လည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ အလိုအပိုမရှိ ကွက်တိ သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်း ဒီကြော်ငြာရိုက်ကွင်းမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ကြော်ငြာ၇ိုက်ကွင်းဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့...
လက်ရှိ ပြည်တွင်းမြန်မာ့ရိုးရာပညာများစွာကို ပြည်ပနိုင်ငံများစွာက နှစ်သတ်သဘောကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါ မြန်မာ့ရိုးရာပညာရပ်တွေထဲမှာ မြန်မာ့ခြင်းပညာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ့ခြင်းပညာကို ပြည်တွင်းတွင်သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများစွာက လေ့လာကစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်း ခြင်းပညာရှင်များစွာကို ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီကခေါ်ယူ လေ့ကျင့်သင့်ကြားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီး လက်ရှိအရှေ့တောင်အာရှနှင့်အခြားပြိုင်ပွဲကြီးများစွာတွင် ထည့်သွင်းကစားနေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မနေ့က...
မြန်မာအိုင်ဒေါ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲက ဝင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့တွဲပြီး မင်းသားနေရာကနေ ကြော်ငြာ စရိုက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇင်ယော်မောင်မောင်က ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ပဲ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားပါတယ်။ ချိန်းထားတဲ့ မနက် ၆ နာရီကို အရောက်လာတာကြောင့်...
မြန်မာနိုင်ငံက မင်းသမီးတွေထဲမှာ မိတ်ကပ်၊ ဘာအပြင်အဆင်မှမလိမ်းဘဲနဲ့ သဘာဝအတိုင်းလှပနေတဲ့ မင်းသမီးတော်တော်များများရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ သတိထားမိတဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းလှပနေတဲ့ မင်းသမီး (၁၄) ယောက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သက်မွန်မြင့် ဖွေးဖွေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်(ခ) ကစ်ကစ် ယွန်းဝတီလွင်မိုး(ခ) ခေး ရွှေမှုန်ရတီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်(ခ)အူဝဲ အေးမြတ်သူ...
လှိုင်သာယာ ကမ်းနားလမ်းမှာ ကလေးတယောက် ကြွက်အသေကောင် ၅ကောင် ၆ကောင်ခန့်ကို ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လမ်းလျှောက်လာနေပါတယ်။ သူဘာလို့ ဒီလောက်ပျော်နေတာလဲ? ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားစုံလှတဲ့ ကြွက်တွေဟာ သူ့အတွက် တနေ့တာ ဝင်ငွေကို ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပြီ...
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲပြီး နောက်ပိုင်း single mother အဖြစ်နဲ့ ဘဝကို ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စနှိုက်ကျော်မမတွေကို တစ်ခါသုံးခွက်နဲ့ နှိုင်းပြီး ပြောသွားခဲ့သလို အိမ်ထောင်ရေးမှာ သည်းမခံနိုင်လို့ လမ်းခွဲခဲ့ရတာပါလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ single...
မုန့်ဟင်းခါး ကိစ္စတုန်းကလိုပဲ ထပ်မံ လုပ်ကြံခံနေရကြောင်း အသိပေးလိုက်တဲ့ အဆိုတော် အိအိ
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ အိအိတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြင်းထန်စွာခံခဲ့ရသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သားသမီးအပေါ် စိတ်ပူပြီး ရေးသားမှုအချို့ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်း မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အိအိအနေနဲ့ အမှန်တကယ်ပြောကြားခြင်းမရှိတဲ့ စာ၊ စကားများအား လုပ်ကြံရေးသားပြီး ဖြန့်ဝေခဲ့မှုများလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အိအိအနေနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနေသော ဖြိုးမြတ်အောင်တို့ မိသားစုကို မည်သည့်ဝေဖန်မှုကိုမှမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘဲနဲ့ ဒေါ်အိအိက ဝေဖန်ရေးသားသည့်ပုံစံမျိုးတွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလည်း အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံနှင့်...
ပရိသတ်တွေအကုန်လုံး မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ယဉ်လက်ရဲ့ အနုပညာသစ်တစ်ခု
ယဉ်လက်လို့အမည်ရတဲ့ မင်းသမီးလေးကတော့ တနေ့ထက်တစ်နေ့ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ ပိုမိုရရှိလာတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုက်တင်ကားလေးတွေရိုက်ကူးရာကနေ လူသိများလာခဲ့ပြီး ခင်လေးဆိုတဲ့ ဇတ်ကောင်လေးကိုရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျိုးစားမှုတွေအရာထင်ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သူလေးတစ်ဦးဆိုလည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။ အနုပညာအလုပ်တွေပြုလုပ်ရရင် ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ယဉ်လက်ကတော့ ပရိသတ်တွေ အံသြမှင်သက်သွားစေခဲ့တဲ့...
ကမ္ဘောဇ မိုဘိုင်း Banking အသုံးပြုသူများ သေချာဖတ်ကြည့်ကြပါ ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တာပါ
Fb friend တို့​ရေ ကိုယ်​​တေဒီ​နေ့ပြုးပြဲ​ပြေးရတဲ့ကိ​တ်​စ​လေး share ချင်​လို့ပါ မနက်​က daddy ကဖုန်းဆက်​လာပါတယ်​ kbz joint account ပိုက်​ဆံထုတ်​လားတဲ့ သူ့ဆီ OTP no ဝင်​လာလို့တဲ့ ကိုယ်​က kbz lock...
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇဏ်ခီပေးလိုက်တဲ့ မှတ်ချက်
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီနားခီတို့ဇနီးမောင်နှံတို့ကတော့ ပရိသတ်တွေ အားပေးချစ်ခင်ဝန်းရံမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ဇဏ်ခီဟာ အနုပညာပိုင်းတင် မက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းတက်ကြွတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဝေဖန်မှုတွေအပေါ် ဇဏ်ခီရဲ့ မှတ်ချက်ပေးမှုတစ်ခု လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာပျံ့နှံလို့နေတာပါ ။...
Page 329 of 334 Prev 1 … 328 329 330 … 334 Next